सामसङको ग्यालेक्सी M21 नेपालमा: ६००० mAH ब्याट्री, ४८ MP क्यामरा तथा sAMOLED डिस्प्ले सहीत - प्रबिधी खबर
सामसङको ग्यालेक्सी M21 नेपालमा: ६००० mAH ब्याट्री, ४८ MP क्यामरा तथा sAMOLED डिस्प्ले सहीत
June 5, 2020 by Prabidhikhabar
नेपालको सबैभन्दा ठूलो एवं सबैभन्दा विश्वासिलो उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स तथा स्मार्टफोन ब्रान्ड, सामसङले हालै #WattaMonster ग्यालेक्सी M21 स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ । यो फोनमा कम्पनीको अग्रणी 6000 mब्ज ब्याट्री, शक्तिशाली 48 मेगापिक्सल रियर क्यामेरा तथा 6.4 “ सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ । यो आजका मिलेनियलहरू, जेन जी हरुका लागि अन—द—गोको अवस्थामा रहन युपयुक्त रहेको छ ।
ग्यालेक्सी M21 को यूएसपी यसको अतुलनीय 6000 mAH ब्याट्री नै हो, जुन दिन र रात सहजै चल्दछ । यसमा टाइप सी फास्ट चार्जिंग सुविधाले अन्य साधारण चार्जिङ्गको तुलनामा ३ गुणा स्पीड बढाइदिएको छ । मोबाइको बक्समा ज्ञछ वाटको चार्जर पनि उपलब्ध रहेको छ ।
ग्यालेक्सी M21 मा उत्कृष्ट सुपर एमोलेड 6.4 ” FHD+ डिस्प्ले रहेकोछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई जीवन्त दृश्यावलोकनको अनुभव प्रदान गर्दछ ।
यस फोनमा एक बहुआयामिक एवं शक्तिशाली ट्रिपल क्यामेरा प्रणाली रहेको छ, जसले जस्तो सुकै अवस्थमा पनि आश्चर्यजनक फोटो खिच्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । ग्यालेक्सी M21 को प्रमुख क्यामरा द्धड मेगापिक्सलको साथ एफ द्द।ण् अपर्चरको साथ रहेको छ । यसमा ड मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेराको साथ ज्ञद्दघ डिग्री फिल्ड अफ भ्यु रहेको छ, यसले मानव आँखाले जस्तो देख्दछ, त्यस्तै फोटो खिच्ने सुविधा प्रदान गर्दछ ।
तेस्रो छ मेगापिक्सेल डेप्थ क्यामेराले प्रयोगकर्ताहरूलाई लाइभ फोकस शटहरूको छुट्टै वस्तु एवं पृष्ठभूमि कैद गर्न मद्दत गर्दछ । यसमा भएको द्दण् मेगापिक्सल क्यामराको सुविधा एवं अन्य विभिन्न क्यामरा मोडहरुले ग्यालेक्सी ःद्दज्ञ बाट उत्कृष्ट सेल्फी लिन सकिनेछ ।
“ग्यालेक्सी M नेपालमा आम युवावर्गहरु माझ छोटो अवधिमा सामसङले आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ । आज ग्यालेक्सी M एउटा उत्कृष्ट एवं ग्राहक केन्द्रित स्मार्टफोनका रुपमा स्थापित भएको छ । ग्यालक्सी M21 श्रृंखलामा हरेक कुराहरु उत्कृष्ट रहेका छन् । यसमा एक शक्तिशाली ब्याट्री, उत्कृष्ट क्यामेरा एवं एक ठूलो स्क्रिन छ जुन नेपालका जेन जी तथा नयाँ पुस्ताका लागि धेरै आकर्षक रहेको छ ।” सामसङ बिजिनेस प्रमुख प्रणय रत्न स्थापितले बताउनु भयो ।
ग्यालेक्सी M21 मा सामसङको Exynos 9611 Octa-core प्रोसेसर रहेको छ जसले नकेवल राम्रो नेटवर्क स्पीड प्रदान गर्दछ, यसले सहज मल्टिटास्ङिको जीवन्त अनुभव पनि प्रदान गर्न सक्षम रहेको छ । यसको भ्हथलयक ढटज्ञज्ञ चिपसेटको साथ ब्क्ष् पावर्ड गेमबुस्टरले फ्रेम दर र स्थिरतालाई अझै सुधार गर्दछ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो मनपर्ने खेलहरू खेल्दा यो फोनले अत्यन्त कम पावर खपत गर्दछ । ग्यालेक्सी M21 दुई मेमोरी कन्फिगरेसनहरू 4/64 GB र 6/128 GB मा उपलब्ध रहेको छ ।
ग्यालेक्सी M21 को पछाडिको भागमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ यसले प्रयोगकर्तालाई अझै बढी सुरक्षा एवं सहजै अनलक गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ।
सामसङ ग्यालेक्सी M21 विभिन्न विषयवस्तु एवं एप्लिकेशनहरु सञ्चालन गर्दा अलाइभ (जीवन्त) अनुभव प्राप्त हुन्छ ।
यसमा भएको फाइन्डर जस्तो सुविधाले मोबइल फोनमा भएका विषयवस्तुहरुलाई तुरुन्तै खोज्न सकिने (जीवन्त) सुविधा प्रदान गरेको छ । यसको फाइन्डरको साथ प्रयोगकर्ताहरुले विषयवस्तु, इकमर्स, फुड तथा उपलब्ध ट्रभल डोमेनहरु सहजै खोज्न सक्नुहुने ।
यसमा भएको अर्को स्मार्ट कर्प सुविधाले स्क्रिन सटहरुलाई अलाइभ (जीवन्ता) प्रदान गर्दछ । यसले स्वतः कर्प गरिएको विषयवस्तुको पहिचान गरी ब्लक/इमेजमा परिणत गर्दछ । सहज ट्याप, स्मार्ट कर्पको साथ सेभ गर्न सकिन्छ र यस्तो विषयवस्तु शेयर एवं सम्पादन गर्न पनि सकिन्छ ।
ग्यालेक्सी M21 मेमोरी अनुसार दुई मूल्य तोकिएको छ, जस अनुसार 4/64 GB को मूल्य रु. २२,९९९ तथा 6/128 GB को मूल्य रु. २७,४९९ तोकिएको छ । यी फोन June 4, 2020 देखि नेपाल आधिराज्यभरका सामसङ ब्राण्ड स्टोरहरुबाट उपलब्ध हुने छन् ।
६४ MP क्यामरा, ६००० mAh व्याट्री तथा १६.२१ से.मि सुपर डिस्प्लेको साथ सामसङ M31 नेपाली बजारमा